जान्नुहोस् , यि हुन् केटीहरुलाई प’टक्कै मन न’पर्ने ६ शब्द! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
जान्नुहोस् , यि हुन् केटीहरुलाई प’टक्कै मन न’पर्ने ६ शब्द!
हालै गरिएको एक अध्यनले स्त्रीहरुको वि’षयमा रोचक जानकारी बाहिर आएको छ । ५००० महिलामाथि गरिएको यो अध्यनका क्रममा विश्वभरीका अधिकाँश महिलाले ६ शब्द सुन्न मन पराउँदैनन् ।
याहू हेल्थका अनुसार अबर्लिन क’लेजमा भाषा विज्ञानका शोधकर्ता पल टिबडो र उनको टिमले गरेको अध्यनका क्रममा महिलाहरुलाई पटक्कै मन नपर्ने ६ शब्दको सूची तयार पारेका हुन् ।कुन हुन् त केटीहरुलाई पटक्कै मन नपर्ने ६ शब्द?
मोइष्ट अर्थात आद्रताः
यो शब्द केटीहरुले मन नपराउने कारण चिसोपन यौनिक अनुभवसँग जोडिनु हो । केटीहरुलाई Moistre भन्ने शब्दले केटीहरुलाई अश्लिल अनुभव गराउने अध्यनले देखाएको छ । यो अध्यनका क्रममा केटीहरुले सबैभन्दा मन नपराउने शब्दमा यो १ नम्बरमा परेको छ । पश्चिमा जगतमा फेसबुकमा बनाइएको I Hate the Word Moist नामको फेसबुक पेज समेत निक्कै चर्चित छ ।
अर्थात स्त्री स्खलनः
पश्चिमा जगतमा महिलाहरु यौन क्रिडापछि स्खलित हुने भनेर बुझाउने झर्रो भाषाको शब्द हो Squirt । यो शब्द केटीहरुले सबैभन्दा मन नपराउने शब्दको सूचीमा दोश्रो नम्बरमा परेको छ । शोधमा सहभागी ६८ प्रतिशत महिलाले यो शब्द आफूलाई सुन्नै मन नपर्ने बताएका थिए। अश्लिल चलचित्रमा बढि चर्चित रहेका कारण पनि यो शब्द घृणाको शब्द बनेको अध्यनको निष्कर्ष छ ।
शोधमा सहभागी भएका ५४ प्रतिशत महिलाले आफूलाई पेन्टी भन्ने शब्द सुन्न मन नलाग्ने बताएका थिए । यौनाङ्ग ढाक्नका लागि लगाइने भित्री बस्त्र भएका कारण स्त्रीहरुलाई यो शब्दसँग घृणा भएको अध्यनको भनाइ छ । यौनसँग यो शब्द नजिक रहेका कारण महिलाहरुले यो शब्द सुन्न मन पराउँदैनन्।
चङ्की अर्थात थलथले मोटीः
महिलालाई मोटी बन्नका लागि प्रयोग गरिने यो शब्द पनि महिलाले सुन्न मन नपराउने शब्दमा परेको छ । यो सबैभन्दा मन नपराइने शब्दको ४ नम्बरमा छ । महिलाहरुलाई यो शब्दले आफू सुन्दर नभएको भान दिने कारण यो शब्दलाई घृणा गर्ने अध्यनको निष्कर्ष छ ।
अध्यनमा सहभागी भएका ४० प्रतिशत महिलाले कर्ड अर्थात दही शब्द पनि सुन्न मन नपराउने बताए । यो शब्दले क्रड जस्तो उच्चारण भएर कुनै कुरा जमाउनु भन्ने अर्थ लाग्ने तथा यसले यौनिक क्रिडामा पुरुषले स्खलित भन्ने अर्थ दिने भएका कारण महिलाहरुले मन नपराएको अध्यनको निष्कर्ष छ ।
महिलाहरुले सुन्न मन नपराउने ६ शब्दको पुछारमा परेको छ Flap फल्याप । अध्यनमा सहभागी २२ प्रतिशत महिलाले आफूलाई फ्ल्याप भन्ने शब्द मन नै नपर्ने बताए । मेडिकलको भाषामा फ्ल्याप स्वस्थ छालाको त्यो भाग हो जुन अन्य स्थानमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । महिलाले यो शब्द पनि मन नपराउने बताएका छन् ।
Previous हेर्नुहोस्! मन्त्री पु’नले संसदमा हिन्दी भाषामा सेधिएको प्रश्नको उत्तर दि’एनन्!
Next पढ्नुहोस्! बिल गेट्सलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो मनछुने पत्र!